BARA DUUTI OROMOOOF DHIYAANA GUYYUU TAHE – Welcome to bilisummaa
Kunoo, erga Fincilli Diddaa Gabrummaa inni otoo walirraa hin cintin, ji’oota sagal guutuu lakkoofsifate kun amma caalayyuu jabatee itti-fufee jira. Fincilli baranaa kun gaafa 12. 11. 15 magaalaa Oromiyaa Waltajjii keessatti argamu, Giincii irraa ka’uun Oromiyaa guutuu dhuunfatee muldhata. Fincilli kun kaabaa-kibba, bahaa-lixa, mandaroota fi magaalaawwan bira kutuun gandeen Oromiyaa cufa waliin gayee argama. Fincilli seena-qabeesichi kun Dhaloota Qabeetiin yoo jalqabamellee amma dargaggeeyyii fi shamarran, ijoollee fi magnuddoolee, dhiiraa-dubartii, quteebulaa fi hojjateebulaa, barataa/ barattuu fi barsiisaa/ barsiiftuu, sheekii fi qeesii, abbootii gadaa fi ayyaantuuwwan hunda nagaan nagaaf hiriirsisee ammas garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Uummanni Oromoo guddichi abbaan nagaa, nagaaf nagaan ka’ee warra nagaa booressuun kumaatamaan galaafatemee argama. Barana dhiigni Oromoo akka galaanaatti gad-lolayee, lafeen Oromoo akka qoraaniitti urreefamee jira. Kun marti Oromoon akka mirgaa fi haqa isaa isa uumaan qabuuf waltahuun tarkaanafatu taasise malee, waan tokkollee isa duubatti hin deebifne. Barana Oromoon waan sodaa jedhamu boolla qotee awwaaluun,bilisummaa fi walabummaa ofiitiif garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira!
Warri Wayyaanee sammu-dhabeeyyii fi gara-bineeyyiiwwan kun dirqiidhumaan gara qabsoo hidhannootti nu dhiibaa jiru. Erga isaan qawwee fi eeboo barbaadanii sabni Oromoo kana isaan badhaasuu malee, filmaata biraa hin qabu. Kana jechuun garuu, qabsoo keenya isa karaa nagaatiin adeemsisaa jirru ni dhaabna jechuu miti. Qabsooleen karaa lamaaniin adeemsifaman kun wal-jajjabeessu malee, kan wal-laaffisanii miti. Amma uummanni Oromoo waan sodaa jedhamu san boolla qotuun awwaallatee jira. Karaa maraan walgargaaruu fi walirratti du’uuf kakuu waliif seenee jira. Addaan-qoodamuu fi walitti-ka’uu biyya irraa hariyatee argama. Maarree, amma nuti bosonaa fi daggala Oromiyaa cufa manneen hin taasifannuu-ree? Leencotaa fi qeerransoota Oromiyaa hiriyoota hin godhannuu-ree? Kakuu dhaa; laguu dhaa otoo nuti lubbuun jirruu Oromiyaan: biyyi Bakar Waaree fi biyyi Leenjisoo Diigaa, biyyi Ilaansoo Halloo fi biyyi Abbishee Garbaa, biyyi Waaqoo Guutuu fi biyyi Taaddoo Birruu, biyyi Maammoo Mazammirii fi biyyi Magarsaa Barii, biyyi Elmoo Qilxuu fi biyyi Garasuu Dhukii faa warra waayee qawwee callaa yaadaa buluu kanaan hin fudhatamu. Tokkummaa keenya alaa-manaa akka sibiilaatti cimsachaa, Oromummaa keenya akka odaatti lalifachaa, kan ammaa caalaa ijaaramnee wal-ijaaraa, hidhannee wal-hidhachiisaa karaa qabsoo bilisummaa keenyaa sirriitti qabannee garum fuulduraatti xuruurra! Akkuma jagnichi keenya Jaarraa Abbaa Gadaa jedhe san: bilisummaa fiwalabummaan Oromiyaa “akka du’aa waan ooluu dandayuu mitii“, gaaraa dakaaa oljechuun haa sochoonu!
Previous Nearly 100 Protesters Killed by Government Forces in Oromo and Amhara Regions of Ethiopia
Next #OromoProtests Hiriira Qeerroo Gujii, Aanaa Sabbaa Boruu aka Garrii Booroo, akka Booroo Harraageessaa